မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုြ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုြ??
မြန်မာ နိုင်ငံသားနှင့်ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများအား ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အဆင့်မြင့်ကုန်ချော ပစ္စည်းအုပ်စု ၂၂ မျိုးကို ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်မှစတင်၍ ပြည်ပတင်ပို့ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်တွင်းအရည်အသွေး မြင့်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပဈေးကွက်သို့ချဲ့ထွင်တင်ပို့ခြင်းအားဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများပိုမို ရရှိစေရန်အတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ ယင်းသို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ပေါင်း စည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ ပြည်ပတင်ပို့တဲ့အခါမှာ သတ်မှတ် ချက်တွေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်တင် ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ကုန်၊ သွင်း ကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားတဲ့ အခါမှာ သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ် နည်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ် ခြင်းကနေတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျှောက် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဌာန တွေရဲ့တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်ကပြောသည်။
ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုခဲ့သော အဆင့်မြင့်ကုန်ချောပစ္စည်းအုပ်စု ၂၂ မျိုးအနက် အသား၊ ငါး၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုး၊ ပျော့ဖတ်နှင့် စက္ကူအမျိုးမျိုး၊ ကြွေရည်သုတ်ပစ္စည်းများ၊ အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ဓား၊ ခက်ရင်းအစရှိသည့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မီးလောင်လွယ်သောအခဲ၊ အရည်၊ အငွေ့၊ အေ ရိုဆော် (Acetylene, Gasoline, Propane, Hair Sprays, Perfume, Deodorant, Insect Spray)၊ ဓာတ်တိုးစေသည့် ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဖိသိပ်ထားသည့် ဓာတ်ငွေ့များ၊ လောင်စားတတ်သည့် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး (အငွေ့၊ အရည်၊ အခဲ)၊ သီးနှံထွက် ပစ္စည်းများအား တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ဘီစကွတ်၊ ဝေဖာ၊ ခေါက်ဆွဲအမျိုးမျိုး၊ ကြာဆံ၊ မြူစွမ်စသည့် စားသောက်ကုန်များ၊ သကြားလုံး၊ ကိုကိုး၊ ချောကလက် အပါအဝင် မုန့်အချိုအမျိုးမျိုး၊ နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းမှအပ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်းပြုလုပ်ထားသော အခြားစားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ မုယောဖောက်လုပ်ခြင်း၊ မုယောဖောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့် ယမကာပစ္စည်းများ၊ ယမကာနှင့် ယမကာမဟုတ်သော အရက်၊ အရက်ပြန်စသည့်ပစ္စည်းများ၊ ရေသန့်နှင့် ရေခဲအမျိုးမျိုး၊ ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုး၊ အလှကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာ ကွယ်ဆေး၊ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါး အမျိုးမျိုး၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဖြည့်စွက်စာ၊ မျိုးစေ့များ၊ စိုက်ပျိုးရေး သုံးပိုးသတ်ဆေး၊ မြေသြဇာ၊ ဟော်မုန်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ သန့်စင်ထားသည့်သတ္တုရိုင်းများကို မြန်မာ နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ တည်ထောင်ထားသောကုမ္ပဏီမှ ပြည်တွင်းတွင်ကိုယ်တိုင်ထုတ် လုပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း ကုန်ပစ္စည်းများကိုတစ်ဆင့်ဝယ်ယူ၍လည်းကောင်းတစ်ဆင့်မြှင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကောက်ပဲသီးနှံနှင့် သစ်သီးဝလံကုန် ကြမ်းတို့မှ တစ်ဆင့်မြှင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချောပစ္စည်းများနှင့် ပြည်တွင်းတွင်နည်းပညာမြင့် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထား သော တန်ဖိုးမြင့်သစ်အခြေခံ ပရိဘောဂပစ္စည်းများကိုလည်း ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ပြုထား ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏အတွင်း ရေးမှူး ဒေါက်တာမြင့်ဆွေက ”နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာပြီဆိုရင် ရင်းနှီးငွေ၊ နည်းပညာ၊ ဈေးကွက်တွေပါလာမယ်။ အဓိကက ဈေးကွက်ရရှိဖို့လိုနေတာ၊ သူတို့ပါလာမယ်ဆိုတော့ ဈေးကွက်လည်းရရှိမယ်။ သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အခါ နည်းပညာအသစ် အသစ်တွေရလာမယ်။ ရင်းနှီးငွေမရှိလို့ မထုတ် လုပ်လာနိုင်တာတွေ ထုတ်လုပ်လာနိုင်မယ်”ဟု ပြောသည်။
မလေးရှား ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် MH 370 ကို ရှာဖွေရန် ငှားထားသော သင်္ဘော ရှာဖွေရေးဇုန်သို့ ရောက်ပြီ
ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့သော ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂကို ရတနာပုံနှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဆရာ?
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ ထီပေါက်သည့် ကံထူးရှင်များအနက် ကျပ်ဆယ်သိန်းနှင်??
ဟူသီသူပုန်များက ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ယူအေအီးနိုင်ငံများသို့ တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးကျည်သုံးကာ ပစ?
စစ်တွေရှိ တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်း ၇၂ ခန်းကို အိုးအိမ်မဲ့ပြည်သူများကို အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် စတင်ေ?